तातेको होइन, तताएको : रेखा थापा
चलचित्र 'हिरो'बाट नेपाली फिल्ममा पाइला टेकेकी नायिका रेखा थापाको त्यसपछि कहिल्यै फिल्मी उद्योगमा खुट्टा लरबराएन । निर्माता छवि ओझासँगको सम्बन्धले समेत उनलाई फिल्मी क्षेत्रमा अग्रस्थान ओगट्न टेवा मिलेको हो । छोटो कपडा, छुद्रो बोली र कामुक अभिव्यक्ति रेखाका चिनारी जस्तै बनेका छन् । झण्डै दुई सय सिनेमामा अभिनय गरिसकेकी रेखाले पति छविसँगको होम प्रोडक्सनबाट समेत आधा दर्जन फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । तर झण्डै एक वर्षदेखि छविसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा बारम्बार विभिन्न कुरा आउँदै सेलाउँदै गरे । कतिपयले हट नायिका भनेर समेत चिन्ने २८ वषर्ीया रेखासँगको छोटो कुराकानीः
झण्डै एक वर्ष तपाइँको वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर फिल्मी क्षेत्र तात्यो नि ?
तातेको होइन । तताएको । लोग्नेस्वास्नीमा अलिअलि मनमुटाब हुनु सामान्य हो । तर केही मिडियाले यसलाई अनावश्यक उचालेको हो । फेरि हामीले पनि १० महिनासम्म हाकाहाकी कुरा नगरी अरुका कुरा मात्रै सुनेछौं । त्यसैले अहिले फेसटुफेस कुरा गरिरहेका छौं ।
अब के सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा आउँछ ?
यसै भन्न सकिन्न । जे पनि हुनसक्छ । कुरा भईराखेको छ । एकअर्काले कत्तिको बानी सुधार्न सकिन्छ त्यसमै भर पर्छ ।
भनिन्छ, फिल्मी क्षेत्रमा आएपछि तपाइँले कहिल्यै पछाडि र्फकनुपरेन । तर नयाँ कलाकारहरुको आगमनले तपाइँ विस्तारै छायाँमा पर्न थाल्नुभएपछि यस्तो स्टन्ट प्रयोग गरेको पनि भन्छन् नि ?
चर्चामा आउन पनि कसैले यस्तो गर्ला र ? यसले घरबार, करियर सबै डुबाउँछ नि । झन् घाटा पो हुन्छ ।
फरक प्रसंग, तपाइँले 'चपली हाइट' हेरेपछि नायिका बिनिता बराललाई अबकी हट नायिका भन्नुभएको थियो । अब आफ्नो दिन गए भनेरै यस्तो भन्नुभएको हो ?
मैले उसको अभिनय क्षमता देखेर त्यसो भनेकी हुँ । नेपाली समाजमा त्यस्तो सिन दिनु चानचुने कुरा होइन । बिनिताको अभिनयमा आत्माविश्वास देखें ।आफू पछाडि परें भन्ने कुरा नै आउँदैन ।
छोटा स्कर्ट लाउँदा तपाइँलाई हट नायिका भन्थे । अहिले त निकै ग्ल्यामरस सिन हुन्छ । यसको जस त तपाइँलाई पनि जाला नि ?
मैले त न्यूरोडमा हिंड्ने केटीले जे लाउँथी फिल्ममा त्यही लगाएँ । त्यति गर्दा पनि मेरो आलोचना फिल्म क्षेत्रबाटै भयो । आलोचना गर्नेहरु पछि किस सिन दिन समेत राजी भए । मैले त त्यस्तो गरेको छैन नि । ग्ल्यामरसको रुपमा मैले क्रान्ति नै गरें त्यतिबेला ।
तर अहिले यौनजन्य दृश्यलाई फोकस गरेर फिल्म बनाउन थालिएको छ । भल्गरिटीको खहरे आएको छ, फिल्ममा । ग्ल्यामरसको नाममा यौन बिकाउन खोजिंदैछ । यसले नेपाली फिल्मको मौलिकपनलाई धक्का दिनसक्छ । तर वर्षमा एकदुईपटक आउने खहरेदेखि डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
आफू पाखा लाग्ने डरले यसो भन्नुभएको त होइन ?
म त ५० वर्षकी उमेरसम्म यस्तै राम्री देखिन्छु ।
तपाइँले बारम्बार सेक्सलाई साधना भन्नुभएको छ । खासमा के भन्न खोज्नुभएको ?
सेक्स साधना नै हो । दालभात खाएजस्तो जतिबेला पायो त्यतिबेला हुँदैन । बन्द कोठामा स्वच्छ मनले गरिने काम भएकोले यसलाई मैले एकप्रकारको साधना भनेकी हुँ । त्यही साधना भएकोले सेक्स बन्द कोठामै ठीक छ फिल्ममा होइन भनेकी । देखाउने चीज होइन ।
नेपाली समाजले पनि यसै भनेर यौनलाई दबाएकोले समाजमा यौनकुण्ठा छ भन्छन् नि ?
यसको बारेमा ज्ञान लिने, दिने कुरा गर्नु ठीकै होला । तर प्रदर्शनी गर्ने चीज होइन ।
आफूलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
म एकदमै साधारण र ज्ञानी केटी । म कहिल्यै पनि यो मीठो भएन, यस्तो पुगेन भनेर घरमा किचकिच गर्दिन । जे पाकेको छ त्यही खाइदिन्छु । त्यही भएर म ज्ञानी छु जस्तो लाग्छ, आफूलाई । साधारण किनभने म फिल्ममा बाहेक मेकअप गर्दिन । बाहिर जानुपर्‍यो भने पाँच मिनेटमै तयार हुन्छु ।
तर अरुले त छुच्ची भन्छन् नि ?
म मनमा कुरा राखिराख्न सक्दिन । चित्त बुझेन भने ठाउँको ठाउँ भन्छु । त्यो व्यक्ति पनि तत्काल झनक्क रिसाउँछ । तर पछि उसले रेखाले ठीकै भनेकी रहिछ भन्ने रिअलाइज गर्छ । म आत्माले जे भन्छ त्यही गर्छु । भोलि के होला, कसले के भन्ला भन्ने डर लाग्दैन ।
रेखा थापा आफूलाई कसरी अग्रस्थानमै रहने भन्नेमा निकै खप्पिस छिन् होइन ?
यस्तो पतरपतर बोल्ने मान्छे कहाँ यस्तो कुरामा खप्पिस हुनु । कालोलाई सेतो भन्न सक्तिन । सत्यता र इमानदारिताको जीत हुन्छ भनेको यही होला सायद ।
nim pun भन्नुहुन्छ:
rekha g ko ek bichar chahi thik lagyo,jun binita le film ma testo garna saknu sahasi kam ho but testa film le ke dekaun6 vanda futurma nilo film na banla van sakidain,yasta yaun janne film harule samaj lai kata tir laijal ra nepali film ma pargati hunekram6tar yasta film le ta jhan abikas tir po lan6
Khem shrestha भन्नुहुन्छ:
Sabai kalakar haru 1utai hun6a vanne pni ta 6aina.bt hijo aaja pradarsanma aayako kehi film harule nepali samajma kehi effect pareko dekhin6a.nywy,@rekha g tapaiko pratikriya malai 1damai man paryo.best up luck....
हर्कु बिस्ट भन्नुहुन्छ:
के के नौतन्की गर्न जानेका हुन यिनिहरले?
nima tamang भन्नुहुन्छ: